Korontana Tao An-drenivohitra: Ireo Sarin’ny Firotsahana Ranomandry Betsaka Tao Tokyo · Global Voices teny Malagasy
Korontana Tao An-drenivohitra: Ireo Sarin'ny Firotsahana Ranomandry Betsaka Tao Tokyo
Voadika ny 29 Janoary 2018 17:32 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, polski, русский, Esperanto , English
Maribolana. “Mivantana avy ao amin'ny gara Shibuya”, firotsahana ranomandry matevina indrindra. 23 santimetatra no tsy maintsy hilatsaka ao amin'ny faritra an-tanandehibe ao Tokyo. Pikantsary tamin'ny fantsona YouTube ANN.
Fara-fahakeliny ranomandry hatreny an-dranjo (30 santimetatra) no nivangongo tao amin'ny faritr'i Tokyo nandritra ny faran'ny herinandro sy ny Alatsinainy 22 janoary 2018. Io no firotsahana ranomandry be indrindra tao Tokyo hatramin'ny taona 2014. Na dia teo aza ny trangana toetrandro nanelingelina ny zotram-pifamoivoizana, mbola nisy koa ny fahafahana naka sary nampangorintsina ho an'ireo mponina sivy tapitrisa tao amin'ny faritry ny renivohitr'i Japana.
Habetsahana ranomandry be indrindra tao tokyo.
Ny faritra manodidina an'i Asakusa ao atsinanan'i Tokyo, faritra iray natokana ho an'ny fizahantany ahitana ilay tempoly malaza indrindra an'i Senso-ji, no nanome ireo sary mahatalanjona manokana.
Raha latsaka ny ranomandry, lasa toy ny hosodoko i Asakusa ＼(^o^)／ #ranomandry #asakusa #asakua_temple
Tany amin'ny lafiny iray tao an-tanàna, mpampiasa Twitter iray no naka sary ny tranga iray tsy nampino tao Shinjuku:
Ranomandry + ireo jiro neon ao Shinjuku = ❤️❄️💛
.Mba niseho koa na i Even Godzilla aza
[…] Tiako ny ranomandry, mampitsiky ahy izy. Raha toa aho tsy afaka manao sarin'olona amin'ny ranomandry, ity ny ranomandry-Godzilla. Halama io rahampitso, noho izany mitandrema!
Ho an'ny mponina ao Tokyo izay tsy zatra ranomandry, fanaintainana iray ny toetrandro. Tamin'ny Alatsinainy hariva nandritra ny fotoanan'ny firavàna mahabetsaka ny olona no nirotsaka ny ranomandry betsaka indrindra.
Hisy firotsahana ranomandry faran'izay betsaka indrindra hirotsaka amin'ny fiantombohan'ny hariva ao amin'ny faritra an-tanandehibe ao Tokyo mandritra ny fifamoivoizana hariva, hiteraka fikorontanana. Hisy fiantraikany amin'ny fifamoivoizana rahampitso maraina ve ny ranomandry? Hanolotra ireo vaovao farany mivantana mikasika ireo faritra samihafa misy ranomandry izahay. Iangaviana tsy hisaraka aminay mandritry ny alina mba hahazoanao ny vinavinan'ny toetrandro amin'ny antsipirihany.
Tena nanangoly ireo tambajotran'ireo arabe migodàna rehetra sy ireo fandoavana haban-dàlana manerana an'i Tokyo afovoany ny firotsahan'ireo ranomandry be loatra, nitarika fitohanan'ny fifamoivoizana.
Mahatsiravina ireo fepetra ao anaty tonelina amin'ny arabe migodàna ao Shuto. Androany nanam-pikasana hanao fitsangatsangana miaraka amin'ny sekoly any amin'ny arabe migodàna ao Odaiba izahay saingy, manontany tena aho raha mandeha ireo fiarabe fitaterana. Mety mbola tsentsina ihany koa ireo fifamoivoizana eo an-tanàna.
Rehefa niantso ny mpampianatra tamin'ny finday aho halina, mbola niahotra foana izy handeha [ho any Odaiba] (・・;)
Mety tsy haninona ve?
Taorian'ny nampihitsoka ny fifamoivoizana tao anatin'ireo tonelina nandritra ny adiny dimy mahery, ny tahotra ny fiangonan'ireo entona avy amin'ny fivoahan-tsetroky ny fiara no nanosika ireo mpitondra fiara sy ireo mpandeha hiala ny fiaran'izy ireo ka handositra.
Taorian'ny fijanonana nandritra ny adiny dimy mahery tao anaty tonelin'i Yamate, olona maro dia maro no nirohotra namonjy fivoahana raha misy loza vokatry ny setroky avy amin'ny fivoahan-tsetroky ny fiara.
Fiara manodidina ny 50 eo ho eo no nihitsoka teo ambony Tetezana Rainbow noho ny ranomandry mavesatra
Ny mponin'i Tokyo, izay tsy zatra tpetrandro be ranomandry amin'ny ankapobeny, dia tsy maintsy namerina nitadidy ny fomba hiomanana amin'ilay toetrandro.
Vokatr'ireo fivangongoan'ny ranmandry tao amin'ny lemak'i Kanto, eritreretina ny hampalàma ny rahampitso maraina. Azafady mitandrema rehefa mandeha mba hisorohana amin'ireo fikorisàna sy ireo fianjerana, na ny lozam-piarakodia.
Nesoin'ny sasantsasany tamin'ireo mpampiasa Twitter ny kapoka sy ny fahagagana naterak'ireo firotsahana ranomandry tsy nampoizina tao Tokyo
Toa marina ny Livecam Tokyo amin'ity faharoa ity.
Naneho hevitra momba ny fikorontanana tao an-drenivohitra ihany koa ireo mponina avy amin'ireo faritra ao Japana izay nahitana fiverimberenanà firotsahana ranomandry. Nandefa sary iray an'ny tanàna ao an-tendrombohitr'i Aizu ity mpampiasa Twitter ity, ao anatin'i Fukushima rakotrny ranomandry, ao avaratra atsinanan'i Tokyo.
Raha toa ka mbola mihazakazaka ireo fiarandalamby, miteraka fikorontanana ao Tokyo, ao anaty fandaharam-potoana tsara mihitsy ny Lalambian'i Aizu androany.
Mponina iray hafa ao Tokyo ihany koa no nanazava hoe nahoana no mety ho olana goavana ao Tokyo ny firotsahana ranomandry: